युवा र युवतीको विवाह गर्ने उमेर कति ? जानी राखौं - IAUA
युवा र युवतीको विवाह गर्ने उमेर कति ? जानी राखौं
ramkrishna December 19, 2016	युवा र युवतीको विवाह गर्ने उमेर कति ? जानी राखौं
विवाह भनेको के हो ?
बिबाह त्यस्तो प्रक्रिया हो, जसले अलग परिवारका दुई विपरीत लिङ्गी व्यक्तिलाई एक सूत्रमा बाँध्छ र यो सामाजिक, धार्मिक तथा कानूनी रुपले मान्य हुन्छ । महिला तथा पुरुष विभिन्न आर्थिक वा सामाजिक कार्यमा सहभागी बन्नु, यौन सम्बन्धमा संलग्न हुनु तथा यौन इच्छाको परिपूर्ति र यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्नु, सन्तान उत्पत्ति गर्नुकासाथै तिनको लालनपालन एवं सामाजिकीकरण गर्नु विवाहको प्रमुख कार्य हो । विवाह स्त्री र पुरुषबीच बलियो सम्बन्धको गाँठो स्थापित गराइ पारिवारिक जीवनमा प्रवेश गराउने एक सामाजिक प्रक्रिया हो ।
विवाहको परिणामस्वरुप महिला पुरुषमा धेरै दायित्वबो सृजना हुन्छ । यस्तो गहन दायित्व बहन गर्न महिला तथा पुरुष आर्थिक, मानसिक तथा भावनात्मक रुपमा पूर्ण विकसित भएको अवस्थामा मात्र सक्षम हुन्छन् । मानव जीवनको विकासक्रमलाई हेर्दा शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास पूर्ण हुन पूर्ण किशोरावस्था वा १९ बर्ष पार भएको हुनुपर्दछ । किशोरावस्थामै हुँदासम्म चाहिँ शारीरिक तथा मानसिक विकासको क्रम जारी नै रहने र शैक्षिक तथा जीवनपयोगी सीप सिक्ने कुरा पनि पूर्ण विकास भइसकेको हुन्न ।
विवाह गर्ने उपयुक्त उमेर र कानुनी प्रावधान
उमेरले मात्र विवाह गर्न योग्य वा सक्षम भयो भनेर मान्न सकिन्न । व्यक्ति आफुले जिम्मेवारी लिन सक्ने, शारीरिक तथा मानसिक स्थिति सन्तुलन भएको र घर परिवार धान्न सक्ने व्यक्तिले विवाह गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर मानिन्छ ।
युवतीको विवाह गर्ने उपयुक्त समय
शारीरिक र मानसिक विकास पूर्ण तबरले भईसकेपछि ;
सुखी परिवार बनाउनको लागि लोग्नेसँग सरसल्लाह र समझदारी कायम गर्न सक्ने भएपछि ;
शिक्षा हासिल गरी सकेपछि ;
आत्मनिर्भर, परिपक्व र आत्मविश्वासी भई सकेपछि ;
आयआर्जन गर्नका लागि सीप तथा दक्षता हासिल गरी सकेपछि ;
बच्चाको स्याहार–सुसार राम्ररी गर्न सक्ने भएपछि ;
आफ्नो र बच्चाको स्वास्थ्य हेरबिचार गर्ने राम्रो जानकारी राख्न सक्ने भएपछि ;
यी सबै कुरा हुन युवतीको उमेर कम्तिमा पनि २० बर्ष पुगिसकेको हुनुपर्दछ ।
युवाको विवाह गर्ने उपयुक्त समय
शारीरिक र मानसिक तवरले पूर्ण परिपक्व भएपछि ;
आयआर्जन गर्न सक्ने भएपछि ;
आफ्नो र परिवारको जिम्मेवारी लिन सक्ने भएपछि ;
सुखी परिवारको लागि श्रीमतीसँग सरसल्लाह र समझदारी कायम गर्न सक्ने भएपछि ;
सुखी परिवार बनाउनमा महिला र पुरुषको उत्तिकै सहभागिता हुनु जरुरी छ ।
Previous Previous post: विवाह गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, कस्तो छान्ने जिवनसाथी ?
Next Next post: ﻿भोली नै बन्नुस मालामाल, धन कमाउने अचुक उपाय